Wafti Wasiiro Saraakiil, Shirgudoonka Nabadaynta Iyo Madax-dhaqameed Ah Oo Maanta Safar Gacan Marin Iyo Samirsiin Ah Ku Tagay Deegaanka Ceeryaan+SAWIRRO – somalilandtoday.com
Wafti Wasiiro Saraakiil, Shirgudoonka Nabadaynta Iyo Madax-dhaqameed Ah Oo Maanta Safar Gacan Marin Iyo Samirsiin Ah Ku Tagay Deegaanka Ceeryaan+SAWIRRO
Ceeryaan (Somalilandtoday)- Subaxnimdii hore ee saaka ayaa waxaa degmada ceel afweyn ka anbo baxay Wasiirada Ciyaaraha iyo Xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga , Shir Guddoonka Shirka Nabadaynta, Abaanduulaha Ciidamada Milatariga , Taliyaha Ciidamada BIrmadka JSl, Sulaadiinta,boqorada iyo cuqaasha xidhayaasha u ah labada dhinac ee beelaha deegaanadaasi wada dega ee gartooda Ergada Nabadayntu U Fadhido.
Waftidan ayaa u anbo baxay deegaanka Ceeryaan Halkaasi oo Sulaadiinta, Boqorada iyo cuqaasha beesha garxajis ku soo samirsiinayeen kuna xaal marinayeen Odaygii Dhawaan shaqaaqadii halkaasi ka dhacday lagaga dilay labada wiil ee uu dhalay. Sidoo kalana waxaa ay garawshiiyo ka bixiyeen in gacantaa gardarada samaysay ay iyagu lahaayeen wax kasto oo beesha walaalahood ahi ku qancaysana ay diyaan u yihiin gogol nabadeeda u fidinayaan.
Dhinaca kale dhigooda ay u tageen ayaa sheegay inay ka aqbaleen beesha qarxajis isla markaana ay uga fadhiyaan nabadaasi samirna ka qaateen ragii ka dhintay ee walaalahood ka dileen siday toontaba haku timaadee.
Sidoo Kale waxaa halkaasi ka hadlay culimada shir gudoonka shirka nabadaynta nabadaynta ee ka socda degmada Ceel Afweyn Sheekh Mamaxamed Sheekh Cumar Dirir, Sheekh Ismaaciil Dheeg iyo Sheekh Berbaraawi oo aad ugu duceeyey odaygii wiilashu ka dhinteen ee ka samray iyo beeshii ay ka baxeenba sida tolniimada iyo walaalnimada leh ee aanay cidna ugu aarin hadana walaalahood uga aqbaleen gogosha nabadeed.
Ugu Danbayn waxaa halkaa hadalo dardaarana u jeediyey wasiirada Ka Socday Dhinaca Xukuumada oo kala ahaa wasiir Xasan Gaafaadhi iyo wasiir Boos Mire oo bulshada kala hadlay inay nabada ilaaliyaan oo calooshooda isku saafigareegaan maanta hadii walaalahood xaq daradii qirteen oo gacantoodi soo gaadhayna tahay sifo fiican oo ku dayasho mudan.